TPolev Tu-204 X-Plane 9
To access the X-Plane Dikan-dahatsoratra 10 ity add-on kitiho eto
Complete fonosana (modely + 2d tontonana + VC + feo) Tupolev Tu-204-300 ao amin'ny loko ny Rosiana Vladivostok fiaramanidina Air. Fiaramanidina ny tsara toetra amin'ny zava-misy sidina modely. Raha andramana aloha e.
Ny Tupolev Tu-204 dia antonony ny fipetrany fiaramanidina sivily novokarin'ny orinasa Rosiana Tupolev. Natao mba hahomby ny Tupolev Tu-154 ary azo oharina amin'ny tandrefana karazana fiaramanidina Airbus sy Boeing A321 757.
Ny Tu-204-300 dia Variant ny Tu-204 fohy ny 6 m. Tsy misy ao amin'ny dikan-roa: ny ela-haben'ny dika dia Powered by Aviadvigatel PS90-A2 fitaovana sy manolotra ambony indrindra isan-karazany ny 9,300 km raha ny dikan-maivana mety hita 3500 km. Ny fandefasana mpanjifa dia Rosia Vladivostok Air.
Downloads 3 794